ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: သမိုင်းပေးတာဝန်
Burma does not haveademocracy.We can not have human rights or worker rights.To tell the truth there is no win-win solution yet but take it or leave it.
ခုလောလောဆယ်မှာတော့ စိတ်လျှော့ပါတော့ ကိုပေါ။ သမားတော်တွေ ဘယ်လောက်တော်တော် အနာသိပ်ပြင်းနေတယ့် အချိန်ဆေးမတိုးပါဘူး။ လူတစ်ချို့က မြင်တာကို မြင်သလိုပြောတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ သိတာကို ပြောတယ်။ သိတိုင်းပြောရင် လက်ခံမှာမဟုတ်သလို မြင်တိုင်းပြောရင် လူမုန်းများပါမယ်။ နောက်ဆယ်နှစ်မတိုင်ခင် နိုင်းမြစ်ပေါ်က အာရပ်နွေဦးမဟုတ်ပဲ ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်က မြန်မာ့ဆောင်းဦးကြီးကို ကြိုမြင်ယောင်နေမိပါတယ်။
China have very good human right & democracy ? Why our country have many ethnic groups than China although we are smaller than China & India ? Then, compare our national status with China & India nationals in this region. We should think smart & fight though we don't like military and speak out for their bad performance.Every country have their internal problems .But they fight each other without bad outcome for their country & nationals interests.